Xisbiga UCID oo Caddeeyay Mawqifkiisa Muddo Kordhinta Iyo Xisbiga KULMIYE oo Aan Ka Soo Saarin Go’aan Rasmiya | Somaliland.Org
March 29, 2009	Hargaysa (Somaliland.org)- Guddoomiyaha xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa caddeeyay mawqifka xisbigiisa ee ku wajahan muddada golaha guurtidu xilka ugu kordhisay Madaxwayne Riyaale iyo ku xigeenkiisa shalay Sabtidii, waxaanu sheegay in aanu marnaba aqbalayn muddo kordhintaasi oo ah todoba bilood.
Eng. Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in Guurtidu aanay xaq u lahayn hawsha muddaynta doorashooyinka, waxaaanu tilmaamay in xisbigiisu sugayo in doorashada madaxtinimada dalku dhacdo 31-ka bisha May sannadka 2009, oo ah muddada Komishanka doorashooyinka qaranku u cayimeen.
Dhinaca kale xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE, ayaan weli soo saarin mawqifkiisa rasmiga ah ee ku aadan muddada golaha guurtidu xilka ugu kordhiyay Madaxwayne Riyaale iyo ku xigeenkiisa, in kasta oo uu Guddoomiyaha xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), si hor dhac ah walaac wayn uga muujiyay muddo kordhintan.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa sheegay in muddo kordhinta guurtidu u samaysay Madaxwayne Riyaale ay dhawaac fool xun u gaysanayso ictiraaf-raadinta Somaliland iyo hanaanka dimuquraadiyadda ee Somaliland ka hana-qaaday.
Mudane Axmed Siilaanyo waxa uu ku eedeeyay Daahir Riyaal Kaahin lacag farabadan oo qayrul dastuuri ah iyo cududii ciidamada Somaliland ee ummadda u dhexda ahaa u adeegsaday meelmarinta qorshaha uu damacsanaa si uu kursiga ugu sii fadhiyo.
Mudane Axmed Siilaanyo waxa kale oo uu intaa raaciyay in muddo kordhinta ay golaha guurtidu sameeyeen aanay xitaa waafaqsanayn muddadii komishanka doorashooyinku dhawaan cayimay iyo in aanay guurtidu wax talo ah kala yeelan arrintan muddo kordhinta axsaabta qaranka.
Xisbiga KULMIYE oo shir uga bilaabmay xaruntooda ayaa la filayaa in ay soo saaraan mawqifkooda kama dambaysta ah ee ku wajahan muddo kordhinta guurtidu u samaysay Madaxwayne Riyaale iyo ku xigeenkiisa.
Muddo kordhintan ayaa waxay timi iyada oo ay muddo dhawr maalmood ahi ka hadhsantahay maalintii muddo kordhintii hore ee sannadka ahayd ee loo kordhiyay Madaxwayne Riyaale iyo ku xigeenkiisa, kadib markii ay dhamaatay muddadii shanta sannadood ahayd ee la doortay badhtamihii sannadkii hore.